यो हो मान्छे खाने पहाड, अहिलेसम्म ८० लाख खाइसक्यो ! - Samudrapari.com
यो हो मान्छे खाने पहाड, अहिलेसम्म ८० लाख खाइसक्यो !
१०१०५ पटक हेरिएको
काठमाडौं – बोलिभियाको दक्षिण पश्चिमी भागमा छ केरो रिको पहाड । बोलिभियामा लामो समयसम्म स्पेनी साम्राज्य रह्यो । स्पेनीहरु यस पहाडलाई धनी पहाड भन्थे । किनकी त्यहाँ प्रसस्तै चाँदी पाइन्थ्यो । पूरै पहाड नै चाँदीले बनेको लाग्थ्यो स्पेनीसलाई । तर स्थानीय मानिसहरु भने यो पहाडलाई मान्छे खाने पहाडको रुपमा चिन्दछन् । १६ औँ सताब्दी देखि अहिलेसम्म यो सहरले ८० लाख जना मानिसलाई खाइसकेको बताउँछन् स्थानीयहरु ।
सन् १५४५ मा स्पेनले उक्त पहाडको काखमा एक सानो सहर स्थापित गरी झण्डै ३० लाख लाख स्थानीय मानिसहरुलाई जबरजस्ती चाँदी खानीको काममा लगायो । उक्त पहाडबाट सदियौँ देखि चाँदी उत्खनन गरिँदै आएको छ । अनुमान अनुसार स्पेनीहरुले त्यहाँबाट २ अर्ब औँस चाँदी निकाले । उक्त चाँदीले नै स्पेनलाई धनी बनायो । लगातारको उत्खननले पहाडको उचाई भने घट्दै गयो ।
ठाउँ ठाउँमा सुरुंग तथा भ्वाङ परे । जसका कारण उत्खनन कठीन बन्यो र दुर्घटना बढ्दै गयो । अहिलेपनि उक्त ठाउँमा झण्डै १५ हजार खानी मजदुरले काम गर्दछन् । उक्त पहाडको आसपासमा धेरै विधवा महिलाहरु छन् । विधवाहरुले एक संगठन नै खोलेका छन् । उनीहरुका अनुसार हरेक महिना उक्त पहाडका कारण १४.१५ जना महिला विधवा हुन्छन् । किनकी उक्त पहाडको चाँदी खानीमा काम गर्ने १४.१५ जना पुरुषको खानी दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ ।
चारै तर्फ धुलो तथा चट्टानबाट निस्कने विषाक्त ग्यासको बिगबिगी छ । सोही कारणले गर्दा खानी मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाहरु रोगका सिकार हुने गरेका छन् । त्यहाँ काम गर्ने वा बसोबास गर्ने मानिसहरुको औषत आयु ४० वर्षमात्र हुने गरेको छ । खानीमा दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ गहिराइका राक्षस मानिने एल टियोको मुर्ति राखेर पुजा समेत गरिन्छ ।
इतिहासकार एडुआर्डो गेलिनोका अनुसार १६ औँ सताब्दी देखि हालसम्म यस पहाडमा ८० लाख मानिस मरिसकेका छन् । -एजेन्सी
क्लोनिङबाट दुई स्वस्थ बाँदर जन्माउन सफल, मानव क्लोनको सम्भावना बढ्यो